Fivezivezen’ny mpampianatra :: Toherin’ny SECES ny teny midina avy amin’ny minisitera • AoRaha
Fivezivezen’ny mpampianatra Toherin’ny SECES ny teny midina avy amin’ny minisitera
Fanoherana. Mampiaka-peo ireo mpampianatra mpikaroka manoloana ny fanapahan-kevitra noraisain’ny minisitera momba an’ireo mpampianatra.
“Nisy teny midina avy amin’ny minisitera mpiahy fa tsy azo atao intsony ny mivoaka ivelan’i Madagasikara raha tsy mahazo alalana avy amin’ny governemanta. Voarara toy izany ihany koa ny fidinana any anivon’ireo distrika na faritra eto Madagasikara raha tsy misy fahazoan-dalana avy amin’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony”, hoy ny profesora Ravelonirina Sammy Grégoire, filohan’ny Sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy ireo mpikaroka mpampianatra na ny Seces, sampana Antananarivo, nitatitra ny fivoriambe nataon’izy ireo, tamin’ny zoma lasa teo.
Takian’ny Seces Antananarivo ny tokony handinihana tsirairay ny zava-misy iainan’ireo mpampianatra mikasika ny fanatanterahana an’izao teny midina izao. “Misy tranga tsy azo anoharana fa tsy maintsy mila teknisiana na manam-pahaizana manokana no ilàna an’ireo fivezivezena ireny”, araka ny fanampim-panazavan’ny sendika.
Nanamafy ny filohan’ny Seces, sampana Antananarivo, fa tsy mihevitra ny handao tanteraka an’i Madagasikara velively izy ireo raha izay no fanahian’ny fanjakana. “Marina fa betsaka lavitra ny karaman’ireo mpampianatra mpikaroka any ivelany, saingy efa nisy aminay no nisafidy ny hiasa eto Madagasikara. Ireo olona efa nisafidy ny hanao an’izany no tokony handraisana fepetra”, hoy izy.
Nampitandremin’ny Seces fa sady hampihisatra ny fanatanterahany ny asa amin’ny maha mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra azy ireo no mety hitondra fikorontanana ho an’ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izany fanapahan-kevitra izany.
Nohazavain’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony, ny Pr Razaranaina Jean Claude anefa fa mpiasam-panjakana ny mpampianatra mpikaroka. “Raha misy iraka any ivelany na fitsidihana atao dia tsy maintsy misy fahazoan-dalana alaina hahafahana mivoaka”, hoy izy. “Mila ampahafantarina ny lehibe ny asa hatao sy ho fiarovana raha sanatria misy loza ihany koa izany”, araka ny teniny.
Fosorohana ny fahafatesana tampoka :: Tokony hahafehy ny vonjy aina ireo mpiasa amin’ny orinasa